Ezindaweni nolaka nemibandela emvelweni yesimanje izifo ezifana dermatitis, umuntu akakwazi umangale, kodwa awukwazi bandla lesi sifo ngoba uqobo wathinteka. Kufanele ngaso sonke isikhathi ukuthi yini wesabe nokuthi ukuze bazivikele. Ngakho, ake sixoxe kabanzi mayelana dermatitis nomzimba.
dermatitis Atopic - uhlobo ukuphendula okungavamile umzimba i umfutho kwangaphandle ukuthintana ngqo naye, ngisho isikhathi kancane isikhathi. Kodwa lapha kubalulekile ukuqonda yilokho abanye abantu abanayo komzimba, kuyinto allergen eqinile abanye. Lesi sifo uhlamvu ngabanye kakhulu, okusho ukuthi indlela eya impatho sicaciselwe esimweni ngasinye emtholampilo. Uma kuziwa lesi sifo, kukhona nombono wokuthi "hypersensitivity", ngoba lokhu umqondo komzimba uhlangabezana ezithile umfutho pathogenic, okuyinto akumelwe sikhohliseke futhi wasuswa kusuka imvelo. Ngaphezu kwalokho kumangaza futhi iqiniso lokuthi sensitization kuyinto ehlukile, edlulisela kuphela allergen oluthile noma iqoqo lezinhlamvu efanayo amakhemikhali isakhiwo kanye nokusungulwa, nge allergen inikezwe.
Isiguli ezingase self-ukuxilonga khona lesi sifo yabo iguliswa dermatitis, izimpawu okuyinto, naphezu ukufana nezinye izinhlobo dermatitis, azikhulumele. Umbala wawo okungazelelwe ngokuvamile simenza izinsolo ifomu okukhulu eczema, kabanzi mayelana ukuthi. Ekuqaleni lesi sifo kukhona izindawo esikhulu esibomvu esikhumbeni, futhi idatha abathintekayo ezindaweni ahambisana inqwaba Bubbles ezincane, okuyinto ke bavame ukuba akhishwe waqhumuka, ngokuletha eziningi ukungakhululeki isiguli, njengoba ishiywe endaweni evuzayo unaphakade umonakalo isikhumba. Ngaphezu kwalokho, bayakwazi ukwakha inqwaba soma amancane izikali, okuyinto awavamile. The main focus ukuvuvukala ise esikhundleni ukuthintana ngqo kwesikhumba ne allergen. Isikhathi esining impela, ezifana ukusabela iguliswa abangela izifo ezifana atopic dermatitis. Lokhu anomaly lonke umzimba, ngakho ekhukhwini kabusha elola yakhe ezingalindelekile. Eziningi zalezi nokuqhuma ahambisana ukulunywa ezinzima, ukuvuvukala kanye umuzwa esivuthayo, okungase kuthinte ibhalansi ngokomzwelo futhi isimo sengqondo isiguli.
Ngaphambi kokuba bathathe ukwelashwa elikhiqizayo, kubalulekile ukuhlola atopic dermatitis ngokuningiliziwe kwezimbangela kanye nemvelo zazo pathogen angaba kakhulu. Ezimweni eziningi kudinga ukutadishwa kwesikhumba, kanye nokuthathwa ahlukahlukene isikhumba iguliswa amasampuli okwengeziwe ukuhlonza degree zokugula zaba namandla kakhulu. uhlelo olunjalo olwenza hhayi kuphela ukwenza uphethwe yini, kodwa futhi enokwethenjelwa ukuhlonza yomdlali ubunjalo exciter main, okuyinto usephendukele futhi ukuqhubeka dermatitis nomzimba.
Uma enolaka umfutho umzimba uchazwa, kungaba bazitshela ukuthi yokutakula eside elindelwe kuyinto isiseduze. Okokuqala sidinga aluqede ngokuphelele isici pathogenic izimpahla, noma yasendlini isabelo (kuncike ubunjalo "inkathazo"), bese wesikhumba ekhetha enye indlela yokwelapha lwemithi, okuyinto has a uhlamvu ngabanye kakhulu. Inkinga ngamunye kudingeka aphathwe kokubili ngaphandle futhi kusuka ngaphakathi, esebenza kwi eziyinkimbinkimbi pathology isikhungo. Ngaphezu kwalokho, kuhle ukuba banamathele Ukudla hypoallergenic okwenza kungabi ngokuphelele ingress ubuthi emzimbeni. Atopic dermatitis njengoba Dynamics ezihlobene isikhumba esibi bathambekele ukuthethelelwa, Nokho reoccurs umfutho futhi abakwaziyo ukusebenza kokushelela.
Eosinophils Ukwandiswa: Izimbangela
Zonke izifo izinzwa? Ingabe izinga lokushisa yenyuka isimiso sezinzwa?
Acanthosis nigricans: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Lapho simazi kangcono umuntu ukuba nobuhlobo obungathi sina. Hlangana
Amafutha "Vella" Izinwele: ukwakheka kanye izakhiwo
Sakha ikhabethe eliyisisekelo ekwindla